mai 2014 – Ecar Sainte Anne Anjomakely
Alakamisy fiakaran’i Jesoa any andanitra – 29/05/2014 – Toriteny
Fantaro fa andro Alakamisy mandrakariva ny Ascension – ary mitovy amin’ny andro alahady rehetra ity andro androany ity, satria andro voadidy hohamasinina.
Rehefa tafatsangan-ko velona Jesoa dia niteny t@ireo vehivavy masina tonga teny am-pasana: “mandehana, ilazao ny mpianatro fa indro hialoha azy ireo any Galiela aho, any no hahitany ahy”.
Tonga tokoa, tong any fotoana, tonga tany Galilea Jesoa, eo @ tendrombohitra mihaona @ireto mpianany.
Mametrapetraka hafatra I Jesoa. Dia ny mamarana ny Evanjely teo, ary izany koa no mamarana ny Envanjelin’I Md Matio: “Indro aho eo aminareo mandrakariva ambara-pahatongan’ny faran’izao tontolo izao”. Izany hoe: “Andriamanitra eo amintsika mandrakariva mandra-pahatapitr’izao tontolo izao”.
Manomboka ny Envajelin’I Md Matio, ary ny hitantsika @izany, rehefa nisalasala I Zozefa dia hoy anjely taminy t@ nofy : “Aza matahotra ny hampakatra an’I Maria ho vadinao, fa ny zaza ao an-kibony dia avy @ Fanahy Masina, ary ny anarany atao hoe Emanoela (Andriamanitra eo amintsika)”.
Vao manomboka ny Envanjely nosoratan’I Md Matio ao @ toko volaohany, dia io no teny mikasika ny ahatongavan’I Jesoa eo ambonin’ny tany. Mifarana ny Evanjelin’I Md Matio ao @toko faha-28 ary ny teny farany dia tenin’I JEsoa: “Indro aho eo aminareo mandrakariva ambara-pahatongan’ny faran’izao tontolo izao”. (suite…)
Continuer la lecture Alakamisy fiakaran’i Jesoa any andanitra – 29/05/2014 – Toriteny
Vakiteny voalohany: Boky mitantara ny Asan’ny Apôstôly (Asa 1, 1-11 )
Nakarina teo anatrehan’ izy ireo Izy.
Ry Teôfily, efa voalazako tamin’ny boky voalohany ny zavatra rehetra nataon’i Jesoa sy nampianariny, hatramin’ny andro nampakarana Azy, nony efa nomeny ny didiny tamin’ny alàlan’ny Fanahy Masina ny Apôstôly izay nofidiny. Taorian’ny nijaliany, dia maro ny porofo nentiny nanamarina tamin’izy ireo fa velona tokoa, sady niseho taminy nandritra ny efa-polo andro Izy, ary nilazalaza ny momba ny Fanjakan’Andriamanitra tamin’izy ireo.
Ary ilay niaraka tamin’izy ireo iny Izy, dia nanafatra azy mba tsy hiala ao Jerosalema, fa hiandry izay nampanantenain’ny Ray, araka ny efa renareo tamin’ny vavako, hoy Izy. Fa i Joany nanao batemy tamin’ny rano, ary ianareo kosa hatao Batemy amin’ny Fanahy Masina, raha afaka andro vitsivitsy. Ka izay tafangona teo dia nanontany Azy hoe: “Tompoko, amin’izay va no fotoana hanangananao ny fanjakan’Israely indray?” Fa hoy ny navaliny azy ireo: “Tsy anareo ny mahalala ny andro na fotoana izay efa nalahatry ny Ray amin’ny fahefany. Fa rehefa hidinan’ny Fanahy Masina ianareo dia hahazo hery, ka ho vavolombeloko any Jerosalema sy eran’i Jodea ary Samaria ka hatrany amin’ny fara vazan-tany”.
Nony efa nilaza izany Izy, dia nakarina teo anatrehan’izy ireo; ary nisy rahona nanakona Azy, ka tsy hitan’ny masony intsony Izy. Raha mbola nibanjina ny lanitra teo izy ireo, tamin’i Jesoa nisondrotra nisondrotra ihany, dia indreo nisy roa lahy niakanjo fotsy niseho teo anilany, nanao hoe: “Ry lehilahy avy any Galilea, nahoana ianareo no mijanona eto mibanjina ny lanitra? Iny Jesoa nalaina taminareo ho any an-danitra iny, dia mbola ho avy indray tahaka ny nahitanareo Azy niakatra any an-danitra.
Vakiteny faharoa : Taratasin’i Md Paoly Apôstôly ho an’ny kristianina tany Efezy (1, 17-23)
Napetraky ny Ray eo an-kavanany any an-danitra Izy.
Ry kristianina havana, Andriamanitra Rain’i Jesoa Kristy Tompontsika, Rain’ny voninahitra, dia hanome anareo ny Fanahin’ny fahendrena amam-panambarana hahalalana Azy tsara; ary mba hampahiratiny tsara ny masom-panahinareo hahalala izao: ny fanantenana niantsoany anareo, ny haben’ny voninahitry ny lova nomaniny ho an’ny olo-masina, ary ny halehiben’ny fahefany mihoa-pampana ho an’izay mino, hita amin’ny fiasan’ny heriny tsitoha. Naharihariny tao amin’ny Kristy izany heriny izany, tamin’ny nananganany Azy ho velona, sy nametrahany Azy teo an-kavanany any an-danitra, ambony lavitra noho ny fiandrianana rehetra, ny fifehezana rehetra, ny fanjakana rehetra, ary ny anarana rehetra azo tononina, tsy amin’izao fiainana izao ihany, fa amin’ny fiainana ho avy koa, fa napetrany eo an-tongony ny zavatra rehetra, ary nataony filohany ambony indrindra Izy amin’ny Eglizy, izay tenany, famenon’Izy mpameno tena an-davany sy an-tsakany amin’ny rantsam-batany rehetra.
Evanjely masina nosoratan’i Md Matio (Mt 28, 16-20)
Nomena Ahy ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. (suite…)
Continuer la lecture Alakamisy fiakaran’i Jesoa any andanitra – 29/05/2014 – Tenin’Andriamanitra
ALAHADY FANKALAZANA NY FETIN’NY RENY
Mamarana ny famakiana ny Evanjelin’i Md Joany toko faha-14 isika.
Ny niatombohan’io dia resaka nataon’i Jesoa tamin’ny mpianany : handeha aho hoy Jesoa, ary rehefa lasa aho hanamboatra toerana ho anareo, dia ho avy indray haka anareo hamonjy ilay toerana…, nalahelo ny mpianatra ka nankahery azy ireo Jesoa tamin’ny heriny.
Hoy Filipo: “Asehoy anay ny Ray dia ampy ho anay izany”. Dia nanazava I Jesoa: “Hatrizay ela izay ve nonitoerako teto aminareo dia mbola tsy fantatrareo ihany ve aho ry Filipo? Izay nahita ahy dia mahita ny Ray koa, ary amin’izay dia efa nahita ny Ray ianareo.”
Dia mbola mitohy ny fanazavan’I Jesoa. Milaza Izy fa handeha, satria amin’ny alakamisy izao isika no mankalaza ny “Ascension”, dia milaza I Jesoa fa “Tsy ho avelako ho kamboty ianareo”, ny Fanahy atao hoe “Mpanafaka alahelo”. Azo iantsoana Azy io koa ny hoe “Avocat” na hoe “Mpisolo vava”. Io nohalefan’I Jesoa rehefa miakatra any @ Ray Izy.
Io no hitari-dalana antsika @ marina rehetra. Io Fanahy Masina io no hanafaka alahelo ary io no entintsika milaza hoe “Ny Fanahy Masina no manohy ny asan’I Kristy”.
Misy fotoana ieritreretantsika hoe “Aiza ary Andriamanitra. Manoloana ny zava-misy ankehitriny, manoloana ny olana, ny korontana?” Ary aiza Kristy ankehitriny manoloana tsy fahamarinana isan-karazany, ny fanosihosena ny zon’olombelona, AIZA ANDRIAMANITRA??? Toa tsy eo Andriamanitra. (suite…)
Continuer la lecture Alahady fahaenina Paka – 25/05/2014 – Toriteny
Hangataka amin’ny Raiko Aho, ka homeny Mpanafaka alahelo hafa ianareo. (suite…)
Continuer la lecture Alahady fahaenina Paka – 25/05/2014 – Tenin’Andriamanitra
Alahady fahadimy Paka – 18/05/2014 – Tenin’Andriamanitra
Ny Asan’ny Apostoly 6,1-7.
Tamin’izany andro izany rahefa nitombo ny isan’ny mpianatra, dia nimonjomonjo tamin’ny Hebrio ny Helenista, satria tsy mba nahina loatra tamin’ny fizarana ny fiantrana isan’andro ny mpitondratena tao aminy.
Ka novorin’ny roa ambin’ny folo lahy ny mpianatra rehetra nilazany hoe: Tsy mety raha ilaozanay mitandrina ny sakafo ny fampianarana ny tenin’Andriamanitra.
Koa amin’izany, ry rahalahy, mifidiana fito lahy eo aminareo, izay tsara laza sady feno ny Fanahy Masina sy fahendrena, mba hametrahanay izany raharaha izany;
ary izahay kosa hikely aina amin’ny fivavahana sy ny fitorian-teny.
Nankasitrahan’ny olona rehetra izany teny izany, ka dia nofidiny Etiena lehilahy feno finoana sy ny Fanahy Masina, Filipo, Prokora, Nikanora, Timona, Parmenasy, ary Nikolà, proselita avy any Antiokia.
Narosony teo anatrehan’ny Apostoly izy ireo, ka nametrahany tànana nony efa vita ny fivavahana.
Dia niely ny tenin’Andriamanitra, nihamaro be dia be ny mpianatra tao Jerosalema, ary betsaka koa ny mpisorona nanaiky ny finoana.
Taratasy Voalohan’i Md. Piera 2,4-9.
Manatòna azy, izay vato velona nolavin’ny olona ihany tokoa, nefa voafidy sy sarobidy eo anatrehan’Andriamanitra kosa;
ary hianareo koa dia mirafeta eo amboniny, toy ny vato velona, mba hitsangana ho tempoly fanahy, ho mpisorona masina, ka hanolotra fanati-panahy ankasitrahan’Andriamanitra, amin’ny alalan’i Jesoa-Kristy.
Fa izany no ilazan’ny Soratra Masina hoe: Indro aho mametraka vato fehizoro ao Siona, dia vato voafidy sy sarobidy, ary izay mino azy tsy hangaihay.
Koa voninahitra ho anareo izay mino; fa ho an’izay tsy mino kosa dia: Ny vato nolavin’ny mpanao trano no efa tonga fehizoro,
ary vato mahasolafaka sy vatolampy mahatafintohina; fa tafintohina amin’ny teny izy ireo satria tsy nanaiky, sady izany rahateo no nanendrena azy.
Fa hianareo kosa dia taranaka voafidy, vahoaka navotana, mba hitorianareo ny hatsaran’ilay niantso anareo hiala tamin’ny aizina, ho amin’ny fahazavany mahagaga:
Evanjely Masin’i Jesoa kristy Nosoratan’i Md. Joany 14,1-12.
Izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana. (suite…)
Continuer la lecture Alahady fahadimy Paka – 18/05/2014 – Tenin’Andriamanitra